यो फेसबुक पनि कमालकै रहेछ - China Radio International
यो फेसबुक पनि कमालकै रहेछ
(GMT+08:00) 2014-08-19 09:04:37
आफ्नो ल्यापटपमा फेसबुक खोल्नासाथ चन्चला नाम गरेकी केटीको अनुरोध देख्यो। उसलाई यसरी फेसबुकमा साथी बन्न दैनिक अनुरोध आउने गर्छन्। तर, ऊ जोकोहीलाई साथी बनाउँदैन। नेपालीले पठाएको अनुरोधलाई भने उसले छानबिन गरेर उचित लागेमा साथी बनाउने गर्छ। उसले चन्चलाको प्रोफाइलमा गएर हेर्‍यो। फेसबुकमा रहेका चन्चलाका साथीहरुलाई केलायो। तर कतैबाट पनि उसले चन्चलाका बारेम भेउ पाउन सकेन। अनि उसले चन्चलालाई अस्वीकार गर्‍यो।
दुई हप्तापछि फेरि चन्चलाले फेसबुकमा एउटा सन्देश पठाई। सन्देशमा लेखिएको थियो 'म तपाईंको फ्यान हुँ। मैले तपाईंका सबै कथाहरु पढेकी छु। धेरै अगाडिदेखि तपाईंलाई भेट्न खोजेँ तर कुनै सम्पर्क सूत्र फेला पारिँन। बल्ल फेसबुकमा तपाईंलाई पत्ता लगाएर अनुरोध पठाएकी थिएँ। तर खै कुनै रेस्पोन्स पाइँन। तपाईंसँग जरुरी कुरा गर्नुछ। तपाईंलाई दुईवर्षदेखि म खोजिरहेकी छु। कृपया मेरो मित्रतालाई स्वीकार गरिदिनुहोला।'
दोधार र दोमनको दोसाँधमै उसले चन्चलाको फेसबुकको मित्रतालाई स्वीकार गर्‍यो। तुरुन्तै चन्चला अनलाइन देखिई। अनि उसको सन्देश टुप्लुक्क देखा पर्‍यो 'मेरो अनुरोध स्वीकार गर्नु भएकोमा धन्यवाद।' अल्छी मान्दा मान्दै उसले चन्चलालाई लेख्यो 'तपाईंलाई पनि धन्यवाद।'
बिहान अथवा बेलुकाको समयमा प्राय चन्चला अनलाइन देखिन्थी। अनि च्याट गर्न थालिहाल्थी। उसलाई फेसबुकमा च्याट गर्न त्यति जाँगर लाग्दैनथ्यो। व्यस्तता र कामको थकावटका बीचमा फेसबुकमा हुने बेतुकका कुराकानी, अनावश्यक लिङ्क, लाइकको अपेक्षामा राखिएका तस्बिर, क्याण्डीक्रस खेल्ने निम्तो, मनोरन्जक भिडियो, जन्मदिन र बिबाहको वार्षिकोत्सवका नोटिफिकेसन आदिले उसको तनाव बढ्ने गर्दथ्यो। तर पनि ऊ फेसबुकलाई पूरै बेवास्ता गर्न पनि सक्दैनथ्यो। पुराना साथीहरुसँग बिचारको आदानप्रदान, सन्चोबिसन्चो, सिर्जना र अनुभव लेनदेन, नयाँ गतिविधिको जानकारी लिने राम्रो माध्यम फेसबुक नै थियो।
फेसबुकले दिएको दैनिक झन्झटभित्र अब चन्चला थपिई। चन्चलाले गर्ने कुराहरु उसले लेखेका कथामा केन्द्रित हुन्थे। ऊ एउटा कथाकार हो। उसले दुईवर्ष अगाडि प्रकाशन गरेको कथा सङ्ग्रहले निकै चर्चा पाएको थियो। एकाध पुरस्कार पाउन पनि सफल भएको थियो। पत्रपत्रिकाहरुका पाना उसका अन्तर्वार्ता र कथा सङ्ग्रहका समीक्षाले भरिन्थे। फेसबुकमा च्याट हुन थालेको दुई हप्तापछि नै चन्चलाले उसलाई भेट गर्न समय मागी। अनि बल्ल उसले चन्चलालाई आफू नेपालमा नभएको बतायो। ऊ विदेशमा बसोबास गर्न थालेको एक वर्ष हुन लागेको थियो। उसलाई भेट गर्न नपाएकोमा चन्चलाले दुःख मनाउ गरी। उनीहरुबीचमा फेसबुक च्याट भने जारी रह्यो।
एक दिन चन्चलाले सोधी 'तपाईं कथा लेख्दा काल्पनिक पात्र उभ्याउनुहुन्छ कि यथार्थ?' उसले कुरा बुझेन। स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्‍यो। चन्चलाले भनी 'तपाईंका कथा यथार्थ घटनामा आधारित हुन्छन् कि काल्पनिक घटनामा भनेर सोधेकी क्या। कुनै कथा लेख्दा त्यसको प्लट कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ?' कथाकार केहीबेर मुस्कुरायो चन्चलाको प्रश्नले। अनि गम्भीर भएर सोच्न थाल्यो आफूले कसरी कथा लेख्यो उसलाई थाहा छैन। तर चन्चलाको प्रश्नको उत्तर त उसले दिनै पर्थ्यो। नत्र चन्चलाले प्रश्न खप्ट्याइहाल्थी। उसले छोटो उत्तर लेख्यो केही यथार्थ र केही काल्पनिक। तर उत्तर ऊ आफैँलाई चित्तबुझ्दो लागेन। उसले फेरि लेख्यो 'कुनै पनि यथार्थ घटना कथा हुन सक्दैन। कथा भनेको पाठकका लागि मन छुने खालको हुनुपर्छ। त्यसकारण यथार्थ घटना समाचार बन्न सक्छ तर कथा बन्न सक्दैन। अनि कोरा काल्पनिक कुरा जिबन्त हुँदैन। मरुभूमि देख्दै नदेखेको र त्यहाँ नपुगेको व्यक्तिले मरुभूमिको कल्पना गरेर कथा लेख्न सक्दैन। हिमाल आरोहण गरेको र समुद्रमा पौडी खेलेको कुरालाई त्यसै कल्पना गर्न सकिन्न। प्रशव वेदनाको अनुभवलाई एउटी आमाको वर्णनजस्तो कुनै पुरुष कथाकारले गर्न सक्दैन। त्यसकारण एउटा कथाकारले समाजमा भएका यथार्थ घटनामा कल्पनाको रङ लगाउँदा राम्रो कथा बन्छ। कथाकार कल्पनाशील हुनुपर्छ ढुङ्गाभित्र संसार देख्नसक्ने। चित्रकारको हातजस्तो हुनुपर्छ कथाकारको दिमाग, जहाँबाट नयाँ सिर्जना गर्न सकियोस्। जसरी दम्पत्तिको सहबासबाट नयाँ बालकको जन्म हुन्छ त्यसरी नै कल्पना र यथार्थको समिश्रण नै कथाको भ्रुण हो।'
चन्चलाले लेखी 'यो त दार्शनिक कुरा हो। म यस्तो कुरा बुझ्दिन। तर तपाईंको कथा सङ्ग्रहमा भएको एउटा कथा ठ्याक्कै मेरो जीवनसँग मिलेको छ।' चन्चलाको कुरा सुनेर कथाकार छक्क पर्‍यो। 'कुन कथामा के कुरा मिल्न गयो तपाईंको जीवनमा?' उसले प्रश्न गर्‍यो। चन्चलाले उसको प्रश्नको साटो प्रश्नै तेर्स्याई 'रित्तो कोठाको तस्बिर कथा कसले भनेर लेख्नुभयो?' चन्चलाको प्रश्न उसका लागि अस्वाभाविक र आकस्मिक थियो। ऊ रनभुल्लमा पर्‍यो। उसले प्रश्नको व्याख्या माग्यो। चन्चलता च्याटमा लेख्दै गई 'त्यो कथामा वर्णित तारा मै हुँ। तपाईंले पात्रको नाम र ठेगाना मात्र फरक रुपमा प्रयोग गर्नु भएको रहेछ। हाम्रै घरमा बस्न आउनु भएको थियो पारस जसलाई तपाईंले प्रकाश भनेर कथामा वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँको घर तपाईंले इलाम भन्नु भएको छ तर उहाँको घर इलाम हैन सोलुखुम्बु हो। पहिले पहिले म पारसलाई घृणा गर्दथ्येँ। बहिनीले चाहिँ खुब माया र सम्मान गर्थी। यो कुरालाई त कथामा त्यसरी नै लेख्नुभएको छ। पछि उहाँको जन्मदिनमा हाम्रो झगडा भयो। तपाईंले कथामा मेरो जन्मदिनमा उहाँलाई नबोलाएको लेख्नुभएको रहेछ। वास्तवमा जन्मदिन पारसको थियो मेरो हैन। उहाँले हामी सबैलाई बोलाउनु भएको थियो तर म गएकी थिइँन। पछि साथीहरुको कुरा र बहिनीले उहाँका बारेमा भनेको कुराले मेरो मनमा परिवर्तन आयो। पारसले मेरो चित्र बनाएको पनि तपाईंले कथामा लेख्नु भएको छ। तर मेरो बारेमा लेखेको कविताको प्रसङ्ग कथामा छैन। पहिले म पारसलाई घृणा गर्थेँ। तर जब म उहाँलाई माया गर्न थालेँ मैले मनको कुरा बताउन नपाइकन उहाँ डेरा सरेर जानुभयो। तपाईंले त्यही कुरा लेख्नुभएको छ। मलाई लाग्छ तपाईंले पारसलाई भेटेको हुनुपर्छ। उहाँले सबै घटना सुनाएपछि तपाईंले त्यो कथा लेख्नुभएको हुनुपर्छ।'
चन्चलाको कुराले कथाकार छक्क पर्‍यो। फेसबुकको च्याटमा उसले चन्चलालाई लेख्यो 'मैले त्यो कथा कल्पना गरेर लेखेको हुँ। कुनै पारसले मलाई भनेको हैन। यस्ता घटना हाम्रो समाजमा सामान्य हुन्छन्। त्यसकारण मैले समाजमा हुनसक्ने कुनै घटनाको कल्पना गरेको हुँ। तपाईंको जीवनमा मिल्न गएकोमा म क्षमापार्थी छु। तपाईंले भनेजस्तै कथाका कतिपय प्रसङ्गहरु ठ्याक्कै मिलेका छैनन्। मैले सो कथामा पात्रको नाम प्रकाश र तारा राखेको छु। मैले कथामा प्रयोग गरेको प्रकाशको घर इलाम हो। उसलाई घरबेटीकी छोरी ताराले आफ्नो जन्मदिनमा बोलाइन। कारण ताराले प्रकाशलाई घृणा गर्छे। पछि ताराको मन फर्किन्छ। ऊ प्रकाशलाई सम्मान गर्न थाल्छे। प्रकाशले ताराको एउटा चित्र बनाउँछ र उसलाई दिएर जान्छ। त्यसकारण यो कथाको विषयवस्तु तपाईंको जीवनको केही भागसँग मिल्न गएको संयोग मात्र हो। त्यो कथालाई सङ्ग्रहमा प्रकाशन गर्नुभन्दा झण्डै दस वर्ष पहिले मधुपर्कमा प्रकाशन गरेको थिएँ। कथा छापिएको दुई महिनापछि नेपालगन्जका एकजना व्यक्तिले पनि आफ्नोजीवनको साँचो कहानी हो भनेर प्रतिक्रिया छपाउनु भएको थियो। त्यसकारणले पनि मैले कथामा छानेको विषय सफल रह्यो भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने एउटा श्रष्टाले कल्पना गरेको विषय कसैकसैको जीवनको नजिक हुनुपर्छ अनि मात्र जिबन्त हुनसक्छ।'
चन्चलाले कथाकारको कुरा पत्याइन। उसले प्रत्युत्तरमा लेखी 'ठीकै छ। तपाईंले पनि कसैलाई गोप्य राख्ने बचन दिनुभएको होला। तर म यत्तिका वर्षदेखि पारसलाई खोजिरहेकी छु। मैले तपाईंलाई भेट गर्न खोजेको पनि पारस भेट्नका लागि मात्र हो। संयोगको कुरा त मैले तपाईंको कथा पढ्नु चाहिँ हो। नत्र म उस्तो कथाहरु पढ्ने मान्छे हैन। कृपया मलाई पारसको ठेगाना अथवा कुनै सम्पर्क माध्यम दिनुहोस्। मलाई त्यति मात्र चाहिएको हो। मैले तपाईंबाट अरु कुनै अपेक्षा गरेकी छैन। म कसम खान्छु पारसको सम्पर्क तपाईंले गराएको भन्ने कुरा मरे पनि भन्ने छैन।'
चन्चलाको कुराले कथाकार झन् झन् आश्चर्यचकित हुनथाल्यो। उसले जति गरे पनि चन्चलाको चित्त बुझाउन सकेन। धन्न नेपालमा लोडसेडिङले गर्दा चन्चलाले धेरै लामो समय कथाकारसँग च्याट गर्न पाइन। तर चन्चलाले फेसबुकमा कथाकारलाई दैनिक झिँझो गर्न छोडिन। उनीहरुबीचमा दैनिक त्यही विषयम घण्टौँसम्म कुरा हुन्थ्यो।
अब कथाकारले चन्चलाको समस्या र गाँठी कुरा थाहा पाउने मनसाय लियो। सुरुसुरुमा उसलाई चन्चलासँग च्याट गर्न झन्झट लाग्थ्यो। तर अब रमाइलो लाग्न थाल्यो। उसले चन्चलाका कुरा खोतल्न थाल्यो। चन्चला पनि पारस पाउने मृगतृष्णामा सबै ओकल्दै गई।
चन्चला कक्षा नौमा पढ्दै गर्दा पारससँग उसको परिचय भएको रहेछ। पारस चन्चलाको घरमा डेरामा बस्न थालेपछि परिचयसँगै चन्चलाको मनमा पारसप्रति घृणा रहेछ। उसले पारसलाई घरबाट निकाल्नका लागि विभिन्न तिड्कम् गरी तर सफल भइन। पारसको सहनशीलता र घरपरिवारमा सबैले मन पराउने कारणले गर्दा चन्चलाको सँधै हार भयो। पारसले आफ्नो जन्मदिनमा घरका सबैलाई बोलाएको तर चन्चलाचाहिँ नगएको घटनाबाट परिवेश बदलिदियो। त्यही साँझ चन्चला र पारसबीचमा सानो झगडा भयो। तर, साथीहरु र बहिनीको कुराले चन्चलाको मन फेरियो। ऊ पारसलाई सम्मान गर्न थाली। पारसले चन्चलाको बारेमा राम्रा राम्रा कविता लेखेको पनि उसले बताई।
फेसबुकका च्याटले कथाकारलाई रमाइलो लागिरहेको थियो भने चन्चला गम्भीर बन्दै गएकी थिई। एक दिन च्याटमा उसले कथाकारलाई लेखी 'अझ मैले डायरीको कुरा गरेकै छैन। सायद तपाईंलाई पनि थाहा छैन होला त्यो डायरीका बारेमा?' कथाकारले तत्कालै सोध्यो 'कुन डायरी?' 'हो मलाई थाहा थियो। पारसले अरु कुरा भनेपनि डायरीका बारेमा पक्कै भन्नुभएको छैन। किनभने त्यो डायरी नितान्त उहाँको व्यक्तिगत थियो जसमा उहाँले मेरा बारेमा आफ्ना भावना राख्नु भएको छ।' चन्चला लेख्दै गई 'कोठा छोडेर जाँदाखेर झुक्किएर हो अथवा जानीजानी हो कोठामा डायरी छोडेर जानुभएछ। मैले त्यो डायरी पढेँ। त्यहाँ मेरा बारेमा थुप्रै कुरा लेखिएको छ। त्यो डायरीको भाषा म त्यतिखेर कक्षा नौमा पढ्ने फुच्चीले के बुझ्थेँ र। अहिले पो त्यो डायरी जति पढ्यो उति पढौँ पढौँ लागेर आउँछ। हरेक पानामा म पारसकै अनुहार चम्किरहेको पाउँछु। त्यतिबेला अहिलेजस्तो मोबाइलफोन र फेसबुकको जमाना थिएन। उहाँको कुनै सम्पर्क माध्यम मसँग छैन। भएदेखि म अहिल्यै उहाँ जहाँ भए पनि उडेर पुग्ने थिएँ र भेट्ने थिएँ।'
कथाकारको पहिले कथा सङ्ग्रह हो 'रित्तोकोठाको तस्बिर'। त्यो सङ्ग्रहभित्र दसवटा कथा थिए उसका। त्यसमध्येको एउटा कथा थियो 'रित्तो कोठाको तस्बिर' शीर्षकथा। कथाकारले पनि आफ्ना कथाहरुमध्ये सबैभन्दा राम्रो कथा मानेको थियो त्यो शीर्ष कथालाई। तर एउटी पाठक त्यही कथालाई मुद्दाका रुपमा उठाइरहेकी छे। ऊसँग कुनै बनिबनाउ उत्तर पनि छैन। उसले केटीलाई कुनै मानसिक बिरामी ठानेर उपचारको सल्लाह दिन पनि सकिरहेको छैन।
चन्चला च्याटमा आफूले भोग्दै आएका कहानी पस्किरहेकी छे। स्नातकोत्तर पढाइ पनि सकेकी छे उसले यसबेला। उसलाई अभिभावकले बिहे गर्न कर गरिरहेका छन्। आफन्तहरुले केटा हेराउन कोही फोटो बोकेर आउँछन् त कोही मान्छे नै लिएर घरमा आउँछन्। ऊ भने पारसकै पर्खाइमा छे। ऊ साउने सोमबारको ब्रत पारसकै लागि बस्छे। तीजमा पानी पनि नखाईकन पारस पाऊँ भन्दै पूजा गर्छे। स्वस्थानीका कथा त उसका आफ्नै भोगाइजस्ता लाग्छन् रे उसलाई।
कथाकारले चन्चलालाई बुझाउन धेरै प्रयत्न गर्‍यो। उसले सोलुखुम्बुतिरको कुनै पारसलाई नचिनेको अर्थ्यायो। उसले रित्तो कोठाको तस्बिर कथा लेख्दाको समय पनि बतायो। तर चन्चलाले उसको कुनै कुरामा विश्वास गरिन। कथालाई मात्र विश्वास गरिरही। उसले च्याटमा लेखी 'अब तपाईंले मलाई सहयोग गर्नुहुन्न भने म के गरौँ त। एकपटक सोलुखुम्बु जान्छु र उहाँका बारेमा सोधखोज गर्छु।'
कथाकार र चन्चलाबीचमा दैनिकजसो च्याट हुन्थ्यो। नेपालमा हुने लोड सेडिङले गर्दा कहिले आधा घण्टामै कुरा टुङ्ग्याउन बाध्य हुनुपर्थ्यो भने कहिले घण्टौँ च्याट हुन्थ्यो।
बिना पूर्व जानकारी चन्चला फेसबुकमा आउन छोडी। एक दिन दुई दिन हुँदै हप्ता दिन बित्यो। कथाकारलाई पनि फेसबुकमा चन्चलासँग च्याट गर्ने नसा चढिसकेको थियो। अरुसँग जतिसुकै च्याट गरे पनि चन्चलासँग च्याट गरेजस्तो भएन। उसलाई एक प्रकारको न्यास्रो लाग्न थाल्यो। चन्चला साँच्चै सोलुखुम्बुतिर गइहोली भन्ने उसले सोच्यो।
दुईहप्तापछि चन्चला आई। आफ्नो दाइ मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर अस्पतालमा कुर्नु परेकाले फेसबुकमा आउन नसकेको उसले बताई। फेरि कथाकार र चन्चलाबीचमा नियमित च्याट हुन थाल्यो। कथाकारले पारसलाई बिर्सनका लागि चन्चलासँग आग्रह गरिरह्यो। तर चन्चला दृढ थिई पारस पाउने आशामा। ऊ भन्थी 'नङ र मासु अलग भएर रहन सक्छन्? पारस काया हो म उसको छाया। भन्छन् अन्धकारमा त छायाले कायालाई पछ्याउन सक्दैन। तर त्यहाँ छाया नदेख्नेको गल्ती हो। छाया त अन्धकारमा पनि हुन्छ। त्यहाँ त ज्योति पो हुँदैन। पारस पानी हो अनि म तिर्खा। तिर्खा लागेपछि पानी जहाँ भए पनि पाइन्छ। पाइएन भने मरिन्छ। म पनि पारस भेटिँन भने मर्छु। आखिर सबैले एकदिन मर्नैपर्छ। कोही पनि अजम्बरी छैन।'
कथाकारले चन्चलालाई फेसबुकमा धेरै समय दिनु उचित ठानेन। ऊ विदेशमै बसेर आफ्नो दोस्रो कथा सङ्ग्रहको तयारी गरिरहेको थियो। अकस्मात उसका बिचारमा नयाँ कथा फुर्‍यो। उसले चन्चलाकै व्यथालाई समेटेर एउटा कथा लेख्ने बिचार गर्‍यो। अनि लेख्यो 'कथाकी पात्र' शीर्षकमा एउटा कथा। त्यस कथामा एउटी युवतीले आफ्नो हराएको प्रेमीलाई पार्वतीले महादेव खोजेजस्तो खोजिरहेको कुरा कलात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरेको थियो। युवतीका सामु हराएको प्रेमी हुँभन्दै जस्तोसुकै रुप, उमेर, अवस्थाको व्यक्ति आए पनि हुने कुरालाई उसले मनोविज्ञानको विश्लेषणका आधारमा कथा तयार बनायो। कथाकी पात्रमा मनोरोग रहेको कुरालाई उसले अनौपचारिक रुपमा व्यक्त गर्‍यो। अनि आफूले चिनेको प्रकाशनगृहलाई आफ्ना कथाहरु पठायो। दुई महिनाको अवधिमै उसको दोस्रो कथा सङ्ग्रह बजारमा आयो।
उसको कथा सङ्ग्रह प्रकाशन भएपछि चन्चलालाई भन्यो मेरो दोस्रो कथा सङ्ग्रह बजारमा आएको छ। पढेर मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। चन्चलाले खुशी र उत्तेजित हुँदै भनी 'आहा! म आजै गएर किताब किनेर ल्याउँछु र रातभरमा पढेर भोलि तपाईंलाई प्रतिक्रिया दिउँला।'
भोलिपल्ट चन्चला फेसबुकमा अनलाइन देखिइन। तर कथाकारको म्यासेजबक्समा एउटा सन्देश रहेको नोटिफिकेसन थियो। उसले त्यहाँ क्लिक गर्‍यो। सन्देश चन्चलाको थियो। उसले लेखेकी थिई 'तपाईं त ब्वाँसो हुनुहुँदोरहेछ। मबाट सबै कुरा धुत्नुभयो र कथा बनाउनुभयो। तपाईंले मेरो भावनालाई बलत्कार गर्नुभयो। कुनै नारीको भावनालाई बलत्कार गरेर सर्जक जिबन्त रहन खोज्छ भने धिक्कार छ त्यस्तो सर्जक र सिर्जनालाई। पहिले पारसको पहिचान लुकाएर ममाथि धोका दिनुभयो। अनि दोस्रोपटक ऊ र मबीचका कुरा रहेको डायरीका कुरा भन्न लगाएर कथा बनाउनु भयो र फेरि धोका दिनुभयो। मैले विश्वास गरेर तपाईंलाई सबै कुरा भनेँ। मैले कसैलाई नभनेका मेरा मनका कुराहरु तपाईंसामु पोखेँ। तपाईंले अहिले नभने पनि पछि अवस्य मलाई पारसका बारेमा भन्नुहोला भन्ने सोचेकी थिएँ। तपाईंमाथि मेरो पूरा विश्वास पनि थियो। तर तपाईंले विश्वासमाथि नै विश्वासघात गर्नुभयो। तपाईंले मलाई मानसिक सन्तुलन बिग्रिएकी केटी पो भन्ठान्नु भएछ। अबदेखि तपाईंसँग कुनै कुरा पनि गर्नु परेको छैन। त्यसकारण मैले तपाईंलाई मेरो फेसबुक आइडीबाट ब्लक गरेकी छु।'
कथाकार सन्देश पढेर धेरै बेर घोरियो र भन्यो यो फेसबुक पनि कमालकै छ।
साभारः सेतोपाटी, असार 23 गते 2071 सोमबार (2014 जुलाई 7)